Mpamatsy milina fanodinana fako voafafa azo alain-java-manidina Hydraulika YiZheng
Milina fanamainana varingarina tokana Rotary amin'ny fanodinana zezika
Screw Extruding FAMPISEHOANA Ny fisarahana ranoka matanjaka
Tsipika famokarana zezika biolojika 50.000 taonina
Crawler Type Organic Waste Composting Turner Machine Overview
Crawler mpamindra zezika voafafa azo alain-tahaka no masinina matihanina ho an'ny zezika zezika sy kozika hafa fanamorana. Izy io dia mandray ny rafitra fandidiana hydraulic, mandrindra ny fiasan'ny familiana herinaratra sy ny rafitra mihazakazaka karazana crawler.
Masinina mpamaky fako mandoto volo voajanahary dia an'ny mode fermentation puile ground, izay fomba mavesatra indrindra amin'ny fitsitsiana ny tany sy ny olombelona ankehitriny. Ny fotony dia mila apetaka ao anaty stack, avy eo atsofoka sy potehina isaky ny elanelam-potoana ny milina mihodina, ary ny famotahana ny zavatra biolojika dia ao anatin'ny fepetra aerobika. Izy io koa dia manana andraikitra tapaka, izay tena mitsitsy fotoana sy herin'ny asa, nahatonga ny fahombiazan'ny vokatra sy ny kalitaon'ny vokatra ny zezika zezika organika nihatsara be, ary nihena be ny vidiny.
Inona no ampiasaina amin'ny milina Crawler Type Organic Waste Composting Turner?
Masinina mpamaky fako mandoto volo voajanahary dia fitaovana tena ilaina amin'ny famokarana zezika biolojika. Izy io dia mandray ny famolavolana fandefasana tratra, izay azon'ny olona iray iasana. Ny fandidiana dia azo vita tsy amin'ny faritra misokatra ihany fa amin'ny atrikasa na trano fonenana. RehefaMasinina mpamaky fako mandoto volo voajanahary ny asa, ny maloto, zezika biby miraikitra ary fitaovana hafa dia azo afangaro tsara amin'ny holatra sy ny vovoka mololo, ka miteraka tontolo aerobika tsara kokoa ho an'ny fanangonam-bokatra. Tsy ny ferment ihany no haingana kokoa noho ny karazana lalin-kazo lalina, fa manakana tsara ihany koa ny famokarana entona manimba sy manitra toy ny hidrôzenina hidrôida, gazy amine ary indole mandritra ny fanamasinana, izay mifanaraka amin'ny fepetra fiarovana ny tontolo iainana.
Tombony azo amin'ny milina fanodinana karazana Crawler Type Composting
Iray amin'ireo fahombiazana ara-teknikan'ny Masinina mpamaky fako mandoto volo voajanahary dia ny fampifangaroana ny fiasa manapotika ireo fitaovana amin'ny dingana manaraka ny fanamasinana. Miaraka amin'ny fivezivezena sy ny fihodinan'ny fitaovana tsy tapaka, ny vatan'ny antsy dia mety hanorotoro ny vongan-javatra vita amin'ny fizotran'ny akora. Tsy mila crusher fanampiny amin'ny famokarana, izay manatsara ny fahombiazan'ny asa sy mampihena ny vidiny.
(1) Ny motera dia motera diesel milamina 38-55KW mitsangana, izay manana hery ampy, fahombiazana avo ary fanjifana solika ambany.
(2) Ity vokatra ity dia navadika ary nosarahina tamin'ny fanombohana malefaka. (Ny vokatra eto an-toerana hafa mitovy karazana aminy dia mampiasa vy ho an'ny vy mafy, izay misy fahasimbana lehibe amin'ny rojo, fitondra ary hazo).
(3) Ny fandidiana rehetra dia malefaka sy tsotra. Amboary ny elanelana misy eo amin'ny vatan'ny antsy sy ny tany amin'ny rafitra hydraulic.
(4) Niorina eo an-tokonam-bokotra hidy hydraulic, noho izany dia tsy ilaina ny maka an-tanana ny antontam-bato rehetra.
(5) Fanamafisam-peo tsy voatery.
(6) Ny milina fanaovana zezika manana horsepower 120 mahery dia namboarina arakaraka ny fitakian'ny mpampiasa.
Fampisehoana horonantsary momba ny fako voajanahary Crawler momba ny fako
Safidy modely Crawler Type Composting Turner Machine
Mamadika ny sakany
R4102-48 / 60KW
R4102-60 / 72KW
4105-72 / 85kw
6105-110 / 115kw
Hery soavaly 95-115
Hafainganana farany ambony
2400 r / min
2400 fihodinana / isa
Hafainganana amin'ny fitondrana fiara
10-50 m / min
6-10m / min
600 ~ 800 toradroa / H
800 ~ 1000 toradroa / H
1000 ~ 1200 toradroa / H
1000 ~ 1500 toradroa / H
Teo aloha: Fivarotana lozisialy lovia rojo
Manaraka: Turner fanangonam-bokatra Hydraulika
Fampidirana Inona no atao hoe tanke fermentation marindrano? Ny fantsom-panafangaroan'ny fako sy ny zezika maripana avo lenta dia miteraka fanamasinana aerobika marobe an'ny biby fiompy sy zezika akoho, fako ao an-dakozia, fotaka ary fako hafa amin'ny alàlan'ny fampiasana ny zavamiaina bitika mba hahatratrarana fitsaboana maloto tafiditra izay manimba ...
Fampidirana Inona avy ireo fitoeran-draozy miompana amin'ny fako sy zezika? Vertical Waste & Manure Fermentation Tank dia manana ny mampiavaka ny vanim-potoanan'ny fermentation fohy, manarona faritra kely sy tontolo iainana sariaka. Ny tanky fermentation aerobic mihidy dia misy rafitra sivy: ny rafitra famahanana, ny reactor silo, ny rafitra drive hidrolika, ny ventilation sys ...
Fampidirana Inona ny masinina Turner Composting Turner? Ny taranaka vaovao an'ny Double Screw Composting Turner Machine dia nanatsara ny hetsika fihodinan'ny axis roa, noho izany dia manana ny asany ny fihodinana, ny fifangaroana ary ny oxygenation, ny fanatsarana ny tahan'ny fermentation, ny famotehana haingana, ny fisorohana ny fofon'ny fofona, ny famonjena ...
Fampidirana Inona ny masinina Groove Composting Turner? Ny masinina Groove Composting Turner izay namboarina ho azy no fitaovana fanamasinana tany am-boalohany indrindra, ampiasaina betsaka amin'ny zavamaniry zezika organika, zavamaniry zezika fambolena, fambolena sy fako, toeram-pambolena sy fambolena bisporus ho an'ny fermentation sy ny fanesorana ...
Turner Composting Type Groove
Fampidirana Inona ny masinina Groove Type Composting Turner? Ny Groove Type Composting Turner Machine no milina fanamasinana aerobika be mpampiasa indrindra sy fitaovana fanodinana compost. Ahitana talantalana, lalan-tongotra, fitaovana fanangonana herinaratra, fanodinana ampahany ary fitaovana famindrana (ampiasaina indrindra amin'ny asa maro-tanky). Ny porti miasa ...